ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး
1 ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 24th December 2009, 10:43 am
ဆောင်ပုဒ် ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ၊ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုရဲ့ ဦးတည်ချက် ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ထိမိစေဖို့ ဖော်ညွှန်းတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုဘဲ ကျနော်တို့ Myanmar IT Resource ဖိုရမ်ဟာလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ ဦးတည်ချက် ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ဖော်ညွှန်းဖို့ အတွက် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးတွေရှိပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့်လည်း MITR ဟာ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ ပိုင်တာမဟုတ် ၊ Member အများစုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၊ ဖိုရမ်ထဲမှာရှိတဲ့ အသင်းသား အားလုံးပိုင်တဲ့ မိသားစု အိမ်လေး တစ်လုံးဖြစ်တာကြောင့် အသင်းသားတို့ရဲ့ အတွေးတွေ စိတ်ကူးတွေကိုလည်း တင်ပြပေးဖို့ ကျနော်တောင်းဆိုပါတယ်။
အားလုံးက ကိုယ်နေတဲ့ အိမ်လေးမှာ ဆောင်ပုဒ်ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခုရှိစေချင်ကြမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကူညီ ၊ မျှဝေ ၊ တိုးတက်စေဖို့ ၊ MITR ဖိုရမ်ကို ၊ သွားကြစို့
ကူညီ - “အတတ်ပညာတစ်ခုအား လေ့လာရန်ခက်ခဲနေသောသူများ ၊ Computer နှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနေသူများအား လက်တွဲကူညီရန်”
မျှဝေ - “မိမိတတ်ထားသော ပညာရပ်များအား ၊ အခြားသူများနှင့် အပြန်အလှန်မျှဝေ ဆွေးနွေးနိုင်စေရန်”
တိုးတက်စေဖို့ - “မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအား နိုင်ငံတစ်ကာနှင့်အညီ ခေတ်မှီစွာ ရင်ဘောင်တန်း၍ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် မိမိတို့အနေနဲ့ အုတ်တစ်ချပ် ၊ သဲတစ်ပွင့် အဖြစ်ဖြင့် ကူညီသွားရန်”
Myanmar IT Resource ဖိုရမ်သို့ သွားကြပါစို့
ဆိုပြီးတော့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်စဉ်းစားထားတာဆိုတော့ ကျနော့်စိတ်ကြိုက်ပေါ့။ ဖိုရမ်ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ကြိုက်ချင်မှလည်း ကြိုက်ကြမှာပါ။ အဲဒီ့အတွက် အားလုံးကလည်း မိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒလေးတွေကို
အောက်က ၂ ခုကတော့ နောက်ထပ် ပြောင်းမယ့် ဘန်နာမှာ ထည့်ချင်တဲ့ စာဖြစ်ပါတယ်။
Share your IT thoughts through MITR
I N F O R M A T I O N...T E C H N O L O G Y...P O R T A L...F O R...M Y A N M A R
2 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 24th December 2009, 11:45 am
$ƴǩǾ wrote: ဆောင်ပုဒ် ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ၊ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုရဲ့ ဦးတည်ချက် ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ထိမိစေဖို့ ဖော်ညွှန်းတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်း ပါ တယ် ဆောင် ပုဒ် လေး ကို သဘော ကျ ပါ တယ်
အများ အကျိုး ဆောင် ကိုယ်. အကျိုး အောင်
အ ဓိ ပါယ် လေး ပါ ရှိ တော. သဘော ကျ ပါ တယ်
3 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 24th December 2009, 11:54 am
mz ဆောင်ပုဒ်ကတော့ ပိုလန်းသလားလို့...
4 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 24th December 2009, 4:47 pm
ကျနော်ကတော့ မြန်မာလိုထက် အင်္ဂလိပ်လိုကိုပိုကြိုက်တယ်။
5 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 24th December 2009, 4:51 pm
နေ့စွဲတစ်ခုထား...ကိုယ်ကြိုက်တာတွေ နောက်ဆုံးထားတင်...ပီးတော့ မဲစနစ်နဲ့ရွေး...အဲဒါကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ.
6 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 24th December 2009, 9:11 pm
သရဲ wrote: နေ့စွဲတစ်ခုထား...ကိုယ်ကြိုက်တာတွေ နောက်ဆုံးထားတင်...ပီးတော့ မဲစနစ်နဲ့ရွေး...အဲဒါကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ.
7 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 25th December 2009, 4:43 pm
ဒါဆို အခု ၂၅ ရက်နေ့ကနေစပြီး ၂၈ ရက်နေ့ထိ (၃) ရက်တိတိ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို ဒီမှာလာတင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
၂၉ နဲ့ ၃၁ ရက်နေ့မှာ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးပြီးတော့ ၁ ရက် ၁ လ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှာ ဆောင်ပုဒ်ကို စတင်သုံးစွဲပါမယ်။
အင်္ဂလိပ် ၊ မြန်မာ ကြိုက်ရာ ဘာသာနဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လာတင်နိုင်ပါတယ်.
အရွေးခံရသော ဆောင်ပုဒ်အား စဉ်းစားသူကို ဖိုရမ်၏ အထူးမင်ဘာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပေးမယ်လို့တော့ စိတ်ကူးပါတယ်။
8 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 25th December 2009, 4:59 pm
ကူညီ၊ ဝေမျှ၊ စဉ်ထာဝရ MITR ဖိုရမ်မှ။
9 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 26th December 2009, 8:43 am
ဒီအကြောင်းကို portal မှာ သတင်းအနေနဲ့တင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ...
10 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 27th December 2009, 4:17 am
သရဲ wrote: ဒီအကြောင်းကို portal မှာ သတင်းအနေနဲ့တင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ...
ဟုတ်တယ်နော်.. နို့မို့ဆိုရင် သိပ်ပြီးတော့ သတိထားမိမယ်မထင်ဘူးရယ်...
11 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 27th December 2009, 7:53 am
နည်းပညာများမျှဝေဖို့MITR ကိုဝင်ကြစို့ .....
To Share the Knowledge..... Signup to MITR
12 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး on 10th April 2010, 5:35 am
ကိုစိတ်တဇရေ အကိုယ် အကြံလေး က တော့ ကောင်းပါ တယ် ကိုယ် နေ တဲ့အိမ် အတွက် ဆောင် ပုဒ် ဆို ပြီး... ဒါ ပေ မယ် ... လောက ကြီးမှာဆောင် ပုဒ် တွေ အများ ကြီးပဲ အားလုံး လို လို က သူ့ဟာ နဲ့သူ အဓိံပ္ပါယ် ရှိတာ ပဲ ... တစ်ခု ကို လက်ကိုင် ပြီးကျန် တဲ့ ဟာ တွေ က လစ်လျူရှုတာ ဖြစ် လိမ့် မယ် လို့တင် ပါ တရ်
13 Re: ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်လေးအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုလောက် ရွေးပေးကြပါဦး